धिरज राई आक्रोशित हुँदै भने – बुद्ध ठुलो कि सलमान ? (भिडियो सहित) – Bisal Chautari
धिरज राई आक्रोशित हुँदै भने – बुद्ध ठुलो कि सलमान ? (भिडियो सहित)
- १८ माघ २०७४, बिहीबार १०:३० मा प्रकाशित
Dhiraj Rai stirred up and said – “Buddha is great that Salman.”
काठमाडौँ ,२०७४ माघ १८ बिहीबार । गौतम बुद्ध नेपालमा जन्मेको हो भनेर विश्वभर चिनाउनका लागि गायक धिरज राई र पत्रकार लबी लामिछाने लागि परेका छन् । बुद्ध नेपालमा जन्मिएको सन्देश विश्वभर फैलाउन गिनिज बुक अफ दि वल्र्ड रेकर्डमा नाम लेखाउका लागि राई र लामिछाने लागि परेका हुन ।
राई १२ वर्ष देखि नै लगी परेका छन् । उनले यस अगाडि नै नेपालसहित विभिन्न देशमा यो अभियानलाई आफ्नो तर्फबाट अगाडि बढाई रहेका छन्, भने रवि लामिछानेले पनि अमेरिकामा हुदादेखि नै बुद्धको बारेमा आवाज उठाउँदै आएका छन् ।
सारा नेपालीको शान्तिको प्रतीक बुद्ध हुनले सबैले हातमा हात मिलाएर सहयोग गर्नु पर्ने राईले अपिल गरेका छन् । उनले यो मुद्दालाई एकदमै कडा रूपमा लानु पर्ने बाताए । तर उनीहरूलाई सरकारको तर्फबाट कुनै सहयोग नभएको बताए । प्रयोजकहरुले पनि कुनै वास्ता नगरेको उनको भनाई छ । उनले प्रयजकहरुले भनेका कुरा उद्धित गर्दै भने “ए तपाईँले बुद्धको गर्दै हुनुहुदो रहेछ हामीलाई त थाहै भएन अलिक छिटो भनेको भए हुन्थ्यो हामीले यसपालिको बजेट त सलमान खानको कार्यक्रमलाई दिई सक्यौ ।” उनले भने “कतिपयाले त बुद्धलाई र्हेन पनि पैसा लाग्छ र ? स्वयम्भसमा गए भने बुद्ध हेर्न पाई हालिन्छ नि ! त्यो भएन भने बैदकोे बुद्ध छँदै छ नि” प्रयाजकहरुले यसो भनेकोमा उनले दुख लागेको बताए ।
उनले आवेगमा आउँदै भने -“सबै प्रयजकहरु चहि सलमानखानको कार्यक्रममा त छाड र म छाड हुँदै स्पोन्सर दिन कुद्ने, बुद्धको लगी चाहिँ तेहि व्यनक्तिहरु भाग्ने” राई भन्छन् ‘सलमान खान नायको पनि नायक हुन । तर भगवान् र्गाैलम बुद्ध मेरो मनको नायक हुन। अब भगवन बुद्धलाई यसरी संसारमा चिननउने यो मैका आउँदैन। यदि हामीले बुद्ध संसारमा चुकायौ भने अब धेरै गाह्रो हुन्छ ।’ उनले आक्रोशित हुँदै भने – “बुद्ध ठुलो कि सलमान ? न नेपाल सरकाले नै हामीलाई सहयोग गरेको छ न प्रयाजोकहरुनै हाम्रा अगाडि लागेको छ । बास्तपमा बुद्ध भन्दा सलमानै पो ठुलो हो कि के हो ? कि रवि जी र मलाई माात्रै योे तातो लगिरहेको हो ?”
उनका अनुसार यही फागुण १९ गते सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा ५० हजार व्यक्ति एकैपटक जम्मा गरेर बौद्ध धर्मगुरुले भगवान् गौतम बुद्धको उपदेश पढ्नु हुनेछ र बुद्ध बाज बार्न इन नेपाल भन्नु हुनेछ । सहभागी ५० हजारले उपदेश दोहोर्याएर बुद्ध बाज बार्न इन नेपाल भन्नेछन् । र, यो रेकर्डका रूपमा गिनिज बुकमा नाम लेखिनेछ ।